कुन रोगीले व्रत नबस्ने ? व्रतालु बेहोश भए यसो गरौं ! | Hamro Doctor News
कुन रोगीले व्रत नबस्ने ? व्रतालु बेहोश भए यसो गरौं !
आजहिन्दुधर्मालम्वीहरुो लोकप्रिय पर्व तीज ।
मधुमेहका रोगी– मधुमेहका बिरामीले तीजको मात्र नभएर कुनै पनि व्रत नबस्दा नै उत्तम हुने डा. निमेशको सुझाव छ । यो रोगका बिरामीले औषधी खाएपछि खाना खानैपर्ने र औषधी नखाँदा सुगरको लेवल ह्वात्तै तल झर्ने भएका कारण पनि व्रत नबस्न भनिएको हो । कतिजना सुगरका रोगी त मिस्रीपानी खाँदै व्रत बस्ने गरेको आफूले पाएको बताउँदै उनले यो झन जोखिमयुक्त तरिका भएको बताए ।यसकारण यो रोगबाट पिडीतहरुले व्रत लिदै नलिन उनको सुझाव छ ।
ग्यास्टिक– ग्यास्टिक रोग लाग्ने कारण नै खाली पेट धेरै समय बस्नु भएकाले यो रोगीले पनि सकेसम्म व्रत नबस्दा नै वेश हुने उनको सुझाव छ । यदि बस्नैपरे पानी पनि नखाई नभई पानी तथा फलफूल खाएर बस्न उनी सुझाउँछन् । उनि भन्छन्–केही नखाई खाली पेट व्रत बस्नु स्वस्थ मानिसका लागि त हानिकारक छ भने ग्यास्टिकका बिरामीले त त्यसो गर्नुहुदैहुदैन ।
उच्च रक्तचाप – यस रोगका बिरामीले व्रत लिनै नहुने भन्दा पनि व्रतलाई परिस्कृत गरेर बस्न सक्नेमा डा. निमेशको जोड छ । तर व्रत बस्दा औषधी कुनै पनि हालतमा छुटाउनै नहुने उनी बताउँछन् । पानी तथा फलफूल खाएर भने उच्च रक्तचापका बिरामी व्रत बस्न सक्ने उनको भनाई छ ।
मुटुसम्बन्धी रोगी – यो रोग लागेका बिरामीहरुले पनि व्रत नबस्दा नै जाती हुने उनको भनाई छ । अझ एकपटक हृदयघात भइसकेकाले त व्रतबारे सोच्दै नसोच्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । यो रोग जटिल र जोखिमयुक्त रोग भएकाले तीज मात्र नभएर कुनै पनि व्रत बस्दै नबस्न उनको सुझाव छ ।
गर्भवती – यस अवस्थाका महिलाहरुले पनि सकेसम्म व्रत नबसेकै राम्रो हुनेमा डा. निमेशको जोड छ । यदि बस्ने नै हुँदा पानी तथा फलफूल अनि जुस खाएर बस्न उनी सुझाव दिन्छन् । गर्भवती महिलाले खाएको खानेकुराबाट नै पेटको बच्चाले पोषण पाउने हुँदा बच्चा र आफ्नो स्वास्थ्यका लागि व्रत नबस्न उनी सुझाव दिन्छन् । यस्तो अवस्थामा व्रत बस्दा बेहोस हुने, रिङगटा चल्ने, बढी थकान हुने लगायतका समस्या देखिन सक्ने उनको भनाई छ ।
सुत्केरी– सुत्केरी महिलाले पनि व्रत नबस्नुपर्नेमा उनको जोड छ । बच्चालाई स्तनपान गराईरहनपर्ने तथा बच्चाको हेरचाह समेत गर्नुपर्ने भएकाले यी अवस्थाका महिलाहरु कुनै पनि व्रतमा नबस्न उनको सुझाव छ ।
Last modified on 2018-09-12 12:23:52